ထောင်ကြွေးကျန် နိုင်/ကျဉ်းဟောင်း ၇ဝဝဝ ကျော် လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရ၊ ထောင်တွင်း လူကျပ်တည်းခြင်ြး?? - Yangon Media Group
ထောင်ကြွေးကျန် နိုင်/ကျဉ်းဟောင်း ၇ဝဝဝ ကျော် လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရ၊ ထောင်တွင်း လူကျပ်တည်းခြင်ြး??
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၉
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရုံး၏ ဧပြီ ၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၁၆/၂ဝ၁၈ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထောင် ကြွေးကျန်ရှိသူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဟောင်းစုစုပေါင်းမှာ ၇ဝဝဝ ကျော် လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၇ဝဝဝ ကျော်မှာ ယခင်အစိုးရအဆက် ဆက်လက်ထက်တွင် ထောင်မှလွတ် ပြီးသော်လည်း ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ-၄ဝ၁ ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ ထောင် ကြွေးများရှိခဲ့သည်ဖြစ်ရာ အဆို ပါ ပုဒ်မခွဲကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည့် အတွက် အဆိုပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၇ဝဝဝ ကျော်မှာ ထောင် ကြွေးကျန်မရှိ တော့ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ၁ဝဝဝဝ အောက်တွင်ရှိနေပြီး လေးပုံသုံးပုံမှာ ထောင် ကြွေးကျန်ဖြင့် နေနေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဟောင်းများအဖွဲ့ ဦးဆောင်ကော်မတီ ဝင် ဦးထွန်းကြည်က ဧပြီ ၁၉ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ”နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဲ့ လေးပုံ သုံးပုံက ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၄ဝ၁၊ အပိုဒ်ခွဲ(၁)နဲ့ ငြိနေတာလေ။ အဲဒီ ဟာနဲ့ ထောင်အြေ<ွကးကျန်ထားတာကိုး။ ဒါကလည်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ဆိုလည်း မမှားဘူး။ အနှောင်အဖွဲ့လည်း ပြော လို့ရတာပေါ့။ အဲဒါကို သမ္မတအသစ် ဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေရဲ့ စိုးရိမ်မှု၊ နောက် လွတ်လပ်စွာပြောပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ် သက်ပြီးတော့လည်း ဒါကြီးက အရိပ်မည်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ လိုက်ပြီးတော့ ခြောက်လှန့်နေတယ်ပေါ့။ အဲတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကိုပါ သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့က ပြောလို့ရအောင်၊ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် ရဲ့ မွေးရာပါအခွင့်အရေးအတွက် လေးပုံသုံးပုံသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဟောင်းတွေရဲ့ အ ကြွေးကျန်တွေအားလုံးကို အမိန့်ကြော်ငြာစာနဲ့ ပယ်ဖျက် ပေးလိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီအပေါ်မှာ ဦးတို့ကတော့ နှစ်ထောင်းအားရဖြစ်မိ တယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဖြေလျှော့ပေးလိုက်သည့်အတွက် နိုင်ငံရေးကျဉ်းသား ဟောင်းများအနေဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိုမို အားကောင်းလာမည်ဟုလည်း ၎င်းက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။ ယခင်က နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ၁ဝဝ တွင် ၇၅ ဦးမှာ ထောင် ကြွေးကျန်ဖြင့် နေနေ ရသည့်သဘောဖြစ်နေသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်လက် ထက်တွင် ပထမဆုံးအနေဖြင့် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့သည့် အကျဉ်းသား စုစုပေါင်း ၈၅၈၁ ဦးတွင် နိုင်ငံရေးအ ကျဉ်းသား ၃၆ ဦးပါဝင်ကြောင်း၊ လက်ရှိ အချိန်တွင် ၁၂ ဦးကျန်ရှိနေသေး ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ မြန်မာပြည်တာဝန်ခံ ဦးအောင်မျိုးကျော်က ပြောသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် AAPP တင်ပြထားသည့် ၄၄ ဦးတွင် ခြောက်ဦး မှာ သင်္ကြန်မတိုင်မီကပင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် ၃၆ ဦးထပ်မံလွတ်မြောက်ခဲ့ရာ ယခင် တင်ထားသည့်စာရင်းအရ ၄၄ ဦးတွင် ၄၂ဦးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး နှစ်ဦးကျန်ရှိ ကြောင်း၊ ယခုထပ်မံရရှိသည့် စာရင်း အရ ၁ဝ ဦးတိုးထပ်မံတိုးလာခဲ့ပြီး ယခင် ကျန်သည့်နှစ်ဦးနှင့်ပေါင်းပါက စုစု ပေါင်း ၁၂ဦး ကျန်ရှိဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
”ကျွန်တော်တို့ စာရင်းတင်ထားတာက ၄၄ယောက်၊ တစ်ယောက်က ကျတော့ နောက်အမှုရှိလို့ နောက် တစ်မှုနဲ့ ကျန်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ် ယောက်ကကျတော့ အကျဉ်းဦးစီးက နေ လူကယ်ပြန်ဘက်ကို လွှဲလိုက်တဲ့အတွက် ဒီမှာမပါလာဘူး။ ကျန်တဲ့ခြောက် ယောက်ကတော့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် မှာတည်းက လွတ်သွားတယ်။ ဆိုတော့ ၄၂ ယောက် လွတ်တယ်ပေါ့။ အဲဒီ အပြင် ဒီစာရင်းတင်ပြီးမှ ကျွန်တော် တို့ဆီ ထပ်ရောက်လာတဲ့စာရင်းမှာ ၁ဝ ဦးကျန်တယ်။ အဲတော့ စုစုပေါင်း ၁၂ ယောက်ကျန်တာပေါ့ဗျာ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံရေးပြစ်မှုများဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရာသူ ၂ဝဝ ဝန်းကျန်ရှိနေသေးပြီး၊ အာမခံဖြင့် အပြင်မှာနေ၍ တရားရင်ဆိုင်နေရသူ ၁ဝဝ ကျော်နှင့် အာမခံမရသဖြင့် အ ချုပ်အတွင်းမှ ရင်ဆိုင်နေရသူ ၇ဝ ကျော်တို့ရှိနေသေးကြောင်း နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးထွန်းကြည် က ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထောင်ပေါင်း ၄၆ ထောင်တွင် ဝင်ဆံ့နိုင်သည့် အကျဉ်း သားဦးရေထက် သောင်းနှင့်ချီ၍ပို များနေပြီး လက်ရှိ လွှတ်ပေးလိုက်သည် မှာ ရှစ်ထောင်ကျော်သာရှိသည့်အ တွက် ထောင်များတွင် လူကျပ်နေဦး မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုး သားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ ဝင် ဦးယုလွင်အောင်က ပြောသည်။
”ထောင်ချောင်လောက်အောင် တော့ မလွတ်သေးဘူး။ လွှတ်ဖို့တော့ လိုနေသေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လူကြီး တွေမှာလည်း သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူရှိ မှာပေါ့။ ရေတိုလွှတ်လိုက်လို့ရတဲ့သူရှိ သလို ရေရှည်စိစစ်ပြီးမှ လွှတ်ရမယ့် သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် အချိန်တစ်ခုလောက်တော့ စောင့်ရမယ် လို့ထင်တယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင်မှ ၂ဝ၁၇ အတွင်း အကျဉ်းထောင် ၄၆ ခုအနက် ၂၆ ခု ကို သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် ဝင်ဆံ့နိုင်သည့်ဦးရေမှာ ၃၂ဝဝဝ ကျော် ဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ်ရှိနေ သည်မှာ ငါးသောင်းကျော်ရှိနေ ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ကုန်ဈေးနှုန်း အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာနှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒ
စာချုပ်သစ်အတွက် သဘောတူညီမှု မရထားသော်လည်း ရမ်ဆေးကို အထူးအခွင့်အရေးပေးမည် မဟုတ်ဟု အူနိုင်း??
သီတင်းကျွတ်ကာလ ကျောင်းပိတ်ရက်တွင် မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ်မှ မဲဆောက်မြို့သို့ သွားရောက် လည်ပတ်သူ မ